ယခုအချိန်တွင် Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင်များ (၂၀၂၀) - နှုန်းထားများ
ယခုအချိန်တွင် Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင်များ (၂၀၂၀)
LAS VEGAS, NV - 21ပြီ ၂၁: Nevada၊ Las Vegas တွင်Rockပြီလ ၂၁ ရက်၊ Hard Rock Hotel & Casino တွင် 'Magic Mike Live Las Vegas' ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုသရုပ်ဆောင် Channing Tatum တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Ethan Miller / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Superbad, Zootopia, Finding Dory နှင့်အခြားသောအရာများအပါအ ၀ င်ယခုအချိန်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်!
Netflix မှာကြည့်ဖို့ရယ်စရာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေပါသလား။ သင်ရွေးချယ်ရန်ထောင်နှင့်ချီသောဟာသများနှင့် Netflix ၏ပင်မစာမျက်နှာကိုကူညီရန် Netflix Life မှကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ ကိုယခုအချိန်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင်စိတ်မပူပါနဲ့! Netflix မှာဟာသထည့်လိုက်တိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်။ ၎င်းသည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ပါ ၀ င်ထိုက်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသင့်သည်ကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတိုင်းပြုလုပ်သည့်အခါမင်းတို့ရုပ်ရှင်အကြောင်းနောက်ခံအနည်းငယ်ပေးခြင်းနှင့်အတူမည်သည့်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်သည်ကိုသင်သိစေရန်ပို့စ်တိုတိုကိုလည်းထုတ်ဝေသည်။
အဲဒီလိုဆိုရင် Netflix နဲ့ Netflix မှာအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ ထဲထည့်သွင်းပေးတဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့အခုဒီစာမျက်နှာကို bookmark, ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် နှင့်တွစ်တာ ( @Netflixlifee ), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အကြှနျုပျတို့၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ။
သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သင်ကြည့်ရှုရန် Netflix တွင်အခြားအကောင်းဆုံးအဆင့် ၅၀ ရှိသည်။
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
Netflix မှအကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင် ၅၀
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀
50 အကောင်းဆုံး Netflix နှင့် Chill Movies
Netflix မှအကောင်းဆုံးထိတ်လန့်မှုရုပ်ရှင် ၅၀
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀
Netflix တွင်အကောင်းဆုံး TV ပြဇာတ် ၅၀
Netflix မှအကောင်းဆုံးတီဗီဟာသ ၅၀
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀
နောက်ထပ် ado မရှိပဲ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ ကိုစတင်ရန်ကြပါစို့။
UNIVERSAL CITY, CA - 20ပြီ ၂၀ - နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်Atပြီ ၂၀ ရက် - Universal City တွင် Universal စတူဒီယိုရှိ Universal စတူဒီယိုဟောလိဝုဒ်ရှိ AMC CityWalk အားကစားကွင်း၌ Fathom Events မှတင်ဆက်ပြသခဲ့သောသူ၏ခံ့ညားထည်ဝါမှုဆိုင်ရာပြဇာတ်အားသောကြာနေ့တွင်အထူးပြသသည့် Ice Cube သည်ပရိသတ်များအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား။ (Gabriel Olsen / FilmMagic မှဓာတ်ပုံ။ )
Next ကိုပြီးနောက် 50. သောကြာနေ့
Ice Cube မှရေးသားခဲ့သည်
Marcus Raboy ကရိုက်ကူးသည်
Ice Cube၊ Mike Epps၊ John Witherspoon၊ Don D.C. Curry၊ Terry Crews၊ Anna Maria Horsford၊ Clifton Powell, Katt Williams နှင့် K.D. Aubert
Next ပြီးနောက်သောကြာနေ့ ၏တတိယရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် သောကြာနေ့ ရုပ်ရှင်ဂိမ်း။ Chris Tucker ကကံမကောင်းတာကတော့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတွေမှာမပါ ၀ င်ပေမယ့်၊
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Craig (Ice Cube) နှင့် Day-Day (Mike Epps) တို့သည်ခရစ်စမတ်မတိုင်မီလုယက်ခံရသည်။ သူခိုးသည်သူတို့၏ငှားရမ်းငွေနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအတွက်သူတို့၏ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များကိုယူပြီးဖြစ်သည်။ Craig နှင့် Day-Day သူတို့၏ပစ္စည်းပစ္စယပြန်ရမစ်ရှင်သွား။
ကံမကောင်းစွာပဲ သောကြာနေ့ နှင့် နောက်သောကြာနေ့ Netflix ပေါ်မှာ streaming ကြသည်မဟုတ်။ Netflix ကကောက်နိုင်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ် သောကြာနေ့ နှင့် နောက်သောကြာနေ့ မကြာမီအချိန်အနည်းငယ်။ Ice Cube နဲ့ Chris Tucker တို့ကို Netflix ကရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သောကြာနေ့မှာရုပ်ရှင်အသစ်တောင်သုံးလို့ရတယ်။
အကြွေး: အထူးသတင်းထောက်များ - Netflix
Ricky Gervais မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားခဲ့သည်
Ricky Gervais၊ Eric Bana၊ Vera Farmiga၊ Kelly Macdonald၊ Kevin Pollak၊ Benjamin Bratt, America Ferrera နှင့်Raúl Castillo တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
In အထူးသတင်းထောက်များ, ရေဒီယိုစာနယ်ဇင်းသမားဖရန့်ခ်ဘွန်းနီဗေး (Eric Bana) နှင့်သူ၏အသံနည်းပညာ Ian Finch (Ricky Gervais) မှသတင်းအတုသည်သက်ဆိုင်မှု၊ လူကြိုက်များမှုနှင့်သတင်းအတုအတုများကို ဦး တည်သွားစေသည်။
အထူးသတင်းထောက်များ flပြီလ 29, 2016 ရက်တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထုတ်ဝေရန်အတွက် Netflix ၏စတုတ္ထမူရင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, ရုပ်ရှင်များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကြီးသောမဟုတ်ကြပေမယ့်ရုပ်ရှင်အမှန်တကယ်ဘယ်လောက်ရယ်စရာနှင့်အတူငါသဘောကျခဲ့တယ်။ Ricky Gervais သည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးလူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများဖြင့်ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေသည်။
အထူးသတင်းထောက် s ကိုလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လူအများစုကပြက်လုံးများနှင့်ပြက်လုံးများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သင့်အတွက်မဟုတ်လျှင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ ကိုကြည့်ရှုပါ။
Co-စာရေးဆရာများနှင့်ဒါရိုက်တာများ Bobby Farrelly (L) နှင့်သူ၏အစ်ကို Peter Farelly (R) တို့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် Los Angeles တွင် 'The Heartbreak Kid' ၏ပြသမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကသူဟာနောက်ဆုံးမိန်းကလေးကိုတွေ့ပြီးအလျင်အမြန်လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုယုံကြည်နေသောယောက်ျား (Ben Stiller) ကိုအဓိကထားဖော်ပြထားသည်။ သူ၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးနှင့်သူ၏သတို့သမီးအသစ်သည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနေစဉ်သူသည်အိပ်မက်များမှမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS (ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်သည် GABRIEL BOUYS / AFP / Getty Images ကိုဖတ်သင့်သည်)
48. Heartbreak Kid
Peter Farrelly၊ Bobby Farrelly၊ Scot Armstrong၊ Leslie Dixon နှင့် Kevin Barnett တို့ရေးသားခဲ့သည်။
Peter and Bobby Farrelly မှရိုက်ကူးသည်
ဘီလ် Stiller၊ Michelle Monaghan၊ Malin Åkerman၊ Jerry Stiller၊ Rob Corddry၊ Carlos Mencia၊ Scott Wilson နှင့် Danny McBride တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
ကြေကွဲဖွယ်ကလေး Neil Simon မှ ၁၉၇၂ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်အတူတူဖြစ်ပြီး Elaine May မှရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ Farrelly Brothers, Peter နှင့် Bobby တို့ကရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည်။
ရုပ်ရှင်၌, အက်ဒီ (ဘင် Stiller), အားကစားဆိုင်မန်နေဂျာနှင့် dork ၏ကြင်နာ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံနှင့်အလုပ်အတွက်ဟော်လန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှသူမ၏တားဆီးဖို့သူ့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့တောင်း။ သူတို့ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွင်ရှိစဉ်အက်ဒီသည်သူသည်ဇနီးအသစ်ကိုမချစ်ကြောင်းနှင့်အခြားမိန်းမနှင့်သူမနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးသူနှင့်အချိန်ဖြုန်းရန်သဘောပေါက်သည်။
ကြေကွဲဖွယ်ကလေး Netflix ရှိအခြားရုပ်ရှင်အချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းသောရုပ်ရှင်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်။ မိုက်မဲပြီးရယ်စရာကောင်းသောအချစ်ဟာသများကိုသင်နှစ်သက်ပါကသင်ကြိုက်လိမ့်မည်ထင်သည်
47 Manson မိသားစုအားလပ်ရက်
ဂျေဒေးဗစ်က Written နှင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်
ဂျီဒပ်ပလက်စ်၊ Linas Phillips၊ Leonora Pitts၊ Adam Chernick၊ Tobin Bell နှင့် Davie-Blue တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
In Manson မိသားစုအားလပ်ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင် Charles Manson နှင့် Manson မိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသောနေရာများစွာသို့သမိုင်းကြောင်းအရသမိုင်းကြောင်းအရညီအစ်ကိုများဖြစ်သော Nick (Jay Duplass) နှင့် Conrad (Linas Phillips) တို့ဖြစ်သည်။
Manson မိသားစုအားလပ်ရက် Duplass Bros. ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ SXSW ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပြသခဲ့သည်။
Manson မိသားစုအားလပ်ရက် အနည်းငယ်မှောင်မိုက်ပြီးပြက်လုံးများကိုအလင်းပေးသည်၊ သို့သော်ခြုံကြည့်လျှင်၎င်းသည်စိတ်ကူးကောင်းသောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ရုပ်ရှင်သည်ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများအပေါ် ၁၀၀ ရာနှုန်းသောအတည်ပြုချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။
46. ​​Staten ကျွန်းနွေရာသီ
Colin Jost မှရေးသားခဲ့သည်
Rhys Thomas မှရိုက်ကူးသည်
ဂျိမ်းစ် DeLuca၊ Will Forte၊ Fred Armisen၊ Cecily Strong၊ အက်ရှလေဂရင်း၊ Bobby Moynihan၊ Mike O'Brien
ကရေးသားခဲ့သည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် Colin Jost, Staten ကျွန်းနွေရာသီ လာမယ့်အသက်အရွယ်ဟာသကိုယူပါမယ်။ Staten ကျွန်းရေကန်နှင့်ရေဥယျာဉ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ် ဦး ဖြစ်သော Danny (Graham Phillips) နှင့်ဖရန့်ခ် (Zack Pearlman) တို့သည်မိန်းကလေးများနှင့်ပါတီကြီးတစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းဖြင့်ပါတီပွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ကောလိပ်သို့မတက်မီ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးနွေကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ ကံကောင်းတာက, Danny နှင့်ရေကူးကန်မှာဖရန့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိထက်ပိုဖြစ်ကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Staten ကျွန်းနွေရာသီ ကြီးစွာသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အများစုမှာဟာသဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြဘူး။ သငျသညျဟာသ၏ဤစတိုင်သို့သငျသညျသော်လည်း, သင်တို့ကိုငါတကယ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်အထူးသဖြင့်သင်တစ် ဦး ပန်ကာနေလျှင် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်။ ၏တန်ချိန်ကနေအဓိကအခန်းကဏ္ and နှင့် cameos ရှိပါတယ် SNL Bobby Moynihan၊ Cecily Strong၊ Will Forte၊ Fred Armisen၊ Mike O'Brien နှင့် Colin Jost အပါအ ၀ င်ကြယ်များ။ ၎င်းသည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ နှင့်ထိုက်တန်သောသရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်!
အကြွေး: အရွယ်ရောက်သူ Beginners
လေး။ အရွယ်ရောက်သူ Beginners
Jeff Cox၊ Liz Flahive နှင့် Nick Kroll တို့ရေးသားခဲ့သည်
Ross Katz မှရိုက်ကူးသည်
Nick Kroll၊ Rose Byrne၊ Bobby Cannavale၊ Joel McHale, Caleb နှင့် Matthew Paddock၊ Paula Garcésနှင့် Mike Birbiglia, Jane Krakowski နှင့် Bobby Moynihan တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ရုပ်ရှင်၌, Jake (Nick Kroll) သည်သူ၏ညီမ, Justine (နှင်းဆီ Byrne) နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း, Danny (Bobby Cannavale), နှင့်သူ၏နည်းပညာကုမ္ပဏီကျရှုံးပြီးနောက်သူသည်မိမိသားနှင့်အတူသူ၏ကလေးဘဝအိမ်သို့ပြန်လည်ရွေ့လျားသူသည်အလုပ်မရှိဘဲထွက်ခွာသွားသည်။ အနည်းငယ်သောငွေပမာဏအတွက် Jake သည်တစ်နေ့တာတွင်သူ၏တူလေးကိုဂရုစိုက်သည်။
အရွယ်ရောက်သူ Beginners အလွန်ကြီးစွာသောသွန်းပါရှိပါတယ်။ နှင်းဆီ Byrne သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး Bobby Moynihan နှင့် Jane Krakowski တို့သည်ထူးခြားသောသရုပ်ဆောင်များကိုထုတ်ပယ်လိုက်သည်။
အရွယ်ရောက်သူ Beginners Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံး Indie ဟာသရုပ်ရှင်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ Nick Kroll သည်ဤသရုပ်ဆောင်သည့်ပရိုဖိုင်း၏အထိခိုက်မခံသောအပြုအမူကိုပြသခဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးသူ့ကိုတကယ်ရယ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်လိုသိပေမဲ့သူဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် အရွယ်ရောက်သူ Beginners ။
အကြွေး: Pee-wee ရဲ့ Big အားလပ်ရက် - Netflix
44 ။ Pee-Wee ရဲ့ Big အားလပ်ရက်
Paul Reubens နှင့် Paul Rust တို့ကရေးသားခဲ့သည်
John Lee မှရိုက်ကူးသည်
Paul Reubens၊ Tara Buck၊ Stephanie Beatriz၊ Joe Manganiello၊ Jessica Pohl၊ Alia Shawkat၊ Hal Landon Jr. နှင့် Brian Palermo တို့ကိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ထည့်သွင်းခဲ့ရသည် Pee-Wee ရဲ့ Big အားလပ်ရက် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်။ Pee-Wee ရဲ့ Big အားလပ်ရက် အောက်ပါစတုတ္ထ Netflix မူရင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် အဘယ်သူမျှမလူမျိုး၏သားရဲ, ရယ်စရာ 6, နှင့် Crouching ကျား, Hidden Dragon: ဓား၏ဓား။
ရုပ်ရှင်၌, Pee-wee သည်သူ၏ပထမဆုံးအားလပ်ရက်ယူပြီးဂျိုး Manganiello ရဲ့မွေးနေ့ပါတီဆင်နွှဲရန်နယူးယောက်သို့သွားရောက်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူအမြဲတမ်းလိုပဲ Pee-wee ကသူ့ကိုယ်သူဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Pee-Wee ရဲ့ Big အားလပ်ရက် Pee-wee Herman ရုပ်ရှင်အားလုံး၏တူညီသောအသံနှင့်အကြောင်းအရာများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်ဟာ Pee-wee Herman နဲ့သူရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်အသစ်ကိုကြည့်ရမယ်။ ဂျိုး Manganiello သရုပ်ဆောင်အများစုကဲ့သို့ရုပ်ရှင်ထဲတွင်စိတ်ကူးယဉ်သည်။
Dan Schneider, Kevin Kopelow နှင့် Heath Seifert မှရေးသားခဲ့သည်
Brian Robbins မှရိုက်ကူးသည်
Ken Mitchell၊ Abe Vigoda၊ Sinbad၊ Shaquille O'Neal၊ Jan Schwieterman၊ Shar Jackson၊ Dan Schneider နှင့် Ron Lester တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဘာဂါ Nickelodeon ပုံကြမ်းဟာသစီးရီးမှပုံကြမ်းကိုအခြေခံသည် အားလုံးဒါ။ ရုပ်ရှင်၏ကြယ်များဖြစ်သည့် Kenan Thompson နှင့် Kel Mitchell တို့သည်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဟာသစီးရီးများနှင့်အတူစီးရီးတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Kenan & Kel ။
In ဘာဂါကောင်းတယ် Dexter (အထက်တန်းကျောင်းသား Kenan Thompson) သည် Good Burger တွင်ဒေသခံဘာဂါတွဲဖက်အလုပ်တွင်အလုပ်ရဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရသည်။ အစောပိုင်းကသံသယ ၀ င်ခြင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားခြင်းရှိသော်လည်း Dexter သည်အထက်တန်းကျောင်းသူ Ed (Kel Mitchell) နှင့်သူငယ်ချင်းများဖြစ်လာပြီးလူတို့အား Good Burger သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထို့နောက် Dexter နှင့် Ed တို့သည် Mond Burger နှင့် Good Burger တို့၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်ကြသည်။ Ed ၏လျှို့ဝှက်ငံပြာရည်ကိုခိုးယူရန်ကြိုးစားနေသည်။
Kenan Thompson ကလည်းသရုပ်ဆောင်သည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်။
စတိဗ်ကို Koren ကရေးသားခဲ့သည်
Bruce McCulloch မှရိုက်ကူးသည်
Mol Green Shannon၊ Will Ferrell၊ Tom Green၊ Elaine Hendrix၊ Harland Williams၊ Tom Green, Emmy Laybourne နှင့် Mark McKinney
စူပါစတား အပေါ်အခြေခံသည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် Molly Shannon မှကစားသော Mary Katherine Gallagher ၏ဇာတ်ကောင်ပါထပ်ခါတလဲလဲပုံကြမ်း။
ထိုရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကက်သလစ်အထက်တန်းကျောင်းမှအထက်တန်းကျောင်းသူ Mary Katherine Gallagher (Molly Shannon) သည်အလွန်အေးချမ်းပြီးနာမည်ကြီးသည့် Sky Corrigan (Will Ferrell) နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။
စူပါစတား ကေဘယ်တီဗီတွင်၎င်း၏အဆုံးမဲ့ပြန်လည်ပြေးဆွဲခြင်းဖြင့်အစွန်းရောက်ဟာသအဆင့်အတန်းကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ သင်မမြင်ရသေးပါကစစ်ဆေးရန်လိုသည်။ ဒါဟာသေချာပေါက် Netflix မှာအကောင်းဆုံးအစွန်းရောက်ဟာသရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်!
David S. Dorfman မှရေးသည်
Peter Segal မှရိုက်ကူးသည်
ဂျက်နီကိုးလ်ဆင်၊ အာဒံ Sandler၊ John Turturro၊ Woody Harrelson၊ Marisa Tomei နှင့် Luis Guzmánတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Dave Buznik (Adam Sandler) သည်လေယာဉ်ပျံပေါ်တွင်အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒေါသထွက်ပြီးသူ၏ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ရန် Anger စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများတက်ခိုင်းသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူ၏ကုထုံးသစ်ဒေါက်တာ Rydell (ဂျက်နီကိုးလ်ဆင်) သည်လေယာဉ်ပေါ်၌ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းသို့ရောက်သောခရီးသည်ဖြစ်သွားသည်။ အတူတူသူတို့က Dave အားသူ၏ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။
အမျက်ဒေါသစီမံခန့်ခွဲမှု အလုံးစုံရုပ်ရှင်ကောင်းမဟုတ်ပေမယ့် Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံးဟာသတွေထဲကတစ်ခုပါ။ အကယ်၍ Adam Sandler ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ ၎င်းသည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ရမည်။
Heather Maidat နှင့် Matt Serword ရေးသားခဲ့သည်
Sheena အမ် Joyce နှင့် Don Argott မှဒါရိုက်တာ
Adam Pally၊ Sarah Burns၊ Reid Scott၊ Catherine Reitman၊ Kate Flannery၊ Kevin Dunn၊ Bobby Moynihan၊ Cecily Strong၊ Mary Grill၊ Peter Grosz၊ Frances Callier နှင့် Gil Ozeri
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Jeff Lowry (Adam Pally) နှင့်အန်းမာတင် (Sarah Burns)၊ အဆင်မပြေသောဆရာမများနှင့်သူငယ်ချင်းနှစ် ဦး တို့သည်သူတို့၏နွေရာသီနားချိန်တစ်ခုအတွင်းသူတို့၏သက်ဆိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကိုသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊
အနှေးသင်ယူသူ Netflix ရှိ Indie ဟာသရုပ်ရှင်များတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Adam Pally နှင့် Sarah Burns တို့သည်သရုပ်ဆောင်ရာတွင်မကြာခဏပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကဟာသတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသည်။ စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် Bobby Moynihan နှင့် Cecily Strong
သငျသညျ indie ဟာသနှစ်သက်လျှင်, အနှေးသင်ယူသူ Netflix မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါ။
Jake Johnson၊ Olivia Wilde၊ Anna Kendrick၊ Ron Livingston၊ Jason Sudeikis၊
သူငယ်ချင်းများသောက်ခြင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် SXSW (South Southwest) Festival တွင်ပြသခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကြောင်းအတွက်ပရိသတ်များဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Luke (Jake Johnson) နှင့် Kate (Olivia Wilde) တို့သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ချီကာဂိုရှိယာဉ်ဘီယာကုမ္ပဏီတွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသောအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်။ လုကာနှင့်ကိတ်တို့တွင်ဓာတုဗေဒအမျိုးအစားအချို့ရှိသော်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသော်လည်းဂျယ်လ် (အန်နာကဒရစ်) နှင့်ခရစ် (Ron Livingston) တို့နှင့်သူတို့၏လက်ရှိဆက်ဆံရေးသည်၎င်းတို့အားအတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းမပြုရန်တားဆီးနေသည်။
သူငယ်ချင်းများသောက်ခြင်း ပျော်စရာကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပေမယ့်ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Netflix မှာရှိတဲ့ပိုပြီးရိုးရာဟာသရုပ်ရှင်တွေထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုများပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါကကောင်းတာပေါ့။ အကယ်၍ သူငယ်ချင်းများသောက်ခြင်း ပိုပြီး Jake ဂျွန်ဆင်ရဲ့လတ်တလောရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည် ရဲများဖြစ်ပါစေ ဒါကြောင့်ယခုကဲ့သို့ကောင်းသောပင်မှအနီးကပ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူး။
ချောမော - ဓာတ်ပုံ Credit: Aaron Epstein
38 ။ ချောမော - Netflix လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရုပ်ရှင်
ဂျက်ဖ် Garlin နှင့် Andrea Siegel ကရေးသားခဲ့သည်
Jeff Garlin မှရိုက်ကူးသည်
Jeff Garlin၊ Natasha Lyonne၊ Amy Sedaris၊ Kaley Cuoco၊ Steven Weber၊ Leah Remini နှင့် Christine Woods တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ချောမော - Netflix လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရုပ်ရှင် သောကြာနေ့မေလ ၅ ရက်တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Netflix မူရင်းရုပ်ရှင်ကားများ၏ယနေ့ဖြစ်သည်။ သငျသညျ Garlin နှင့်သူ၏အလုပ်ကိုကြိုက်လျှင်, သင်ကျိန်းသေဒီရုပ်ရှင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Detective Gene Handsome (Jeff Garlin) နှင့် Detective Fleur Scozzari (Natasha Lyonne) တို့သည် Los Angeles ရှိလူသတ်မှုအမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားကြသည်။
အရမ်းတစ်ခုခုရှိတယ် Angie Tribeca ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်း။ ဒါဟာအတော်လေးအားလုံးထွက်ဟာသချေမှုန်းရေးမဟုတ်ပါဘူး Angie Tribeca ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကခြုံငုံအလွန်ရီစရာများနှင့်ရယ်စရာပါပဲ။ ဒီညထွက်စစ်ဆေးကြည့်ပါ ဦး!
ရော့ဘားနက်မှ Written နှင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်
Paul Rudd၊ Craig Roberts၊ Selena Gomez၊ Megan ဖာဂူဆန်၊ ဂျနီဖာအဲလ်၊ ဖရက်ဒရစ်ဝဲလ်လာ၊ Bobby Cannavale နှင့် Julia Denton
ဂရုစိုက်မှု၏အခြေခံ Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Jonathan Evison ၏စာအုပ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် စောင့်ရှောက်မှု၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအခြေခံ။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Ben (Paul Rudd) သည်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောလူငယ် Trevor (Craig Roberts) အတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်သည်။ အတူတူ, သူတို့စုံတွဲအနောက်တစ်လျှောက်လုံးတစ်လမ်းခရီး၌သွားကြ၏။
ဂရုစိုက်မှု၏အခြေခံ 2016 Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသခဲ့သည်။
သင် Netflix ကိုကြည့်ရှုရန်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲအံ့သြဖွယ်ရာရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ရွေးချယ်မည့်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ Paul Rudd၊ Craig Roberts နှင့် Selena Gomez တို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖျော်ဖြေပွဲအချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
David Brent: လမ်းပေါ်ရှိဘဝ - ဓာတ်ပုံအကြွေး - Netflix
၃၆ David Brent: လမ်းပေါ်ရှိဘဝ
Starrin Ricky Gervais၊ Ben Bailey Smith၊ Andy Burrows၊ Jo Hartley၊ Tom Basden၊ Mandeep Dhillon နှင့် Tom Bennett
In David Brent: လမ်းပေါ်ရှိဘဝ၊ Rick Gervais သည်သူ၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော David Brent ကိုပြသသည် ရုံး ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံး sitcoms တစ်ခုဖြစ်သည့် UK ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က U.K. တွင်ပြသခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကဖေဖော်ဝါရီလ 10 ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Netflix ကအပေါ်ပြသခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အရောင်းစာရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သော David Brent သည်သူ၏ပင်စင်ကိုယူပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း Foregone နိဂုံးနှင့်အတူသုံးပတ်ခရီးစဉ်ကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, တီးဝိုင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသည်, သူ၏ bandmates ဒါဝိဒ်နှင့်အတူအဆင်မပြေပါဘူး။
သင်ပင်မြင်ကြပြီမလိုအပ်ပါဘူး ရုံး ဒါကကူညီလိမ့်မယ်ပေမယ့်, ဒီရုပ်ရှင်ကိုခံစားရန်။ ငါတို့ချစ်တယ် လမ်းပေါ်ရှိဘဝ , ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အထင်လိမ့်မယ်ထင်!
Win It All- ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - Netflix
Jake Johnson နှင့် Joe Swanberg မှရေးသည်
ဂျိုး Swanberg မှဒါရိုက်တာ
Keegan-Michael Key နှင့် Aislinn Derbez တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်
အားလုံးအနိုင်ရ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်မြို့ရှိအနောက်တောင်ပိုင်းရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတပွဲတော်အားဖြင့်တောင်ပိုင်းတွင်ပြသခဲ့သည်။ Netflix သည်ရုပ်ရှင်ကိုကောက်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ Aprilပြီလတွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အက်ဒီ (ဂျိတ်ဂျွန်ဆင်) သည်သူ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည်အကျဉ်းထောင်မှစော။ ပြန်လွတ်လာရန်အတွက်၎င်းအားကိုင်ဆောင်ထားခြင်းအားဖြင့်ငွေအမြောက်အမြားကိုပြန်အရယူရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။
အားလုံးအနိုင်ရ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်အထိမြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုသတိရပြီးအခွင့်အရေးရရင်ကြည့်နိုင်မှာပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် အားလုံးအနိုင်ရ, သင်လည်းထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် အရက်မူးသောက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်၊ နှင့် Netflix ကမူရင်းစီးရီး လွယ်ကူပါတယ်။ အားလုံးသောအရာများကို Swanberg မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခု Netflix ကို streaming လုပ်သည်။
Greg Mottola မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားခဲ့သည်
Jesse Eisenberg၊ Kristen Stewart၊ Ryan Reynolds၊ Bill Hader၊ Martin Starr၊ Kristen Wiig တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ကောလိပ်ဘွဲ့ရပြီးနောက် James Brennan (Jesse Eisenberg) သည်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးသူ့မိဘများကသူအားဖြတ်တောက်နေကြောင်းနှင့်သူသည်နွေ ဦး ကျောင်းသို့မတက်မီနွေရာသီတွင်အလုပ်ရရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။ နွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်ဂျိမ်းစ်သည် Adventureland ဟုခေါ်သောအပန်းဖြေဥယျာဉ်တစ်ခုတွင်အလုပ်ရခဲ့သည်။ ချက်ချင်းပင်ဂျိမ်းစ်သည်လုပ်ဖော် Em (Kristen Stewart) ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာပြီးနွေရာသီတွင်ဂျိမ်းစ်သည်ထူးဆန်းပြီးညံ့ဖျင်းသောဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုပိတ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ဒါ့အပြင်ညွှန်ကြားသူ Greg Mottola မင်္ဂလာပါ ရေးသားခဲ့သည်နှင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည် ကွမ်းခြံကုန်း ဘယ် သူ၏ဒုတိယအရေးအသားအကြွေးနှင့်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးကတည်းကသာဖြစ်ခဲ့သည် အဆိုပါ Daytrippers (ကိုးကိုးဆယ်ခြောက်) ။
ဒီသွန်း, အနုတ်က Kristen Stewart က, သင်ထင်ချင်ပါတယ် ကွမ်းခြံကုန်း ဒါဟာပိုပြီးပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် Bill Hader, Kristen Wiig နဲ့ Martin Starr တို့လိုလုပ်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရှာမယ့်အစားသူတို့ကပြက်လုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းကိုရွေးချယ်ကြတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုရယ်စရာကောင်းနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် Hader နဲ့ Wiig တို့ကဟာသသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဟာသပညာတွေလိုချင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
CANNES, ပြင်သစ် - မေ 11: (2ndL-R) ဂျက်ဖရီကတ်ဇင်ဘာ၊ Justin Timberlake၊ ဒါရိုက်တာ Mike Mitchell, Anna Kendrick နှင့်ဒါရိုက်တာ Walt Dohrn တို့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ကိန်းမြို့၌မေလ ၁၁ ရက်၊ ၆၆ နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပသောကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်း 'Trolls' Photocall သို့တက်ရောက်သည်။ ။ (Clemens Bilan / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၃၃ Dreamworks '' Trolls
Jonathan Aibel နှင့် Glenn Berger မှရေးသားသည်
Mike Mitchell နှင့် Walt Dohrn တို့ကရိုက်ကူးသည်
ဂျိမ်းစ်ကော်ဒန်၊ ရပ်စယ်လ် Brand နှင့် Gwen Stefani တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
Dreamworks '' Trolls ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန် ၇ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်နို ၀ င်ဘာလ 2016 တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လအနည်းငယ်အကြာတွင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဒါကမကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲမဟုတ်ဘူး!
အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် Trolls အရုပ်များပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်အိမ်တွင်းဗီဒီယိုများအတွက်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Justin Timberlake မှဖျော်ဖြေသော Theme သီချင်းသည်အော်စကာဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
HOLLYWOOD, CA - 06ပြီ 06: မင်းသား Adam Sandler သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Hollywoodပြီ ၆ ရက်၊ 2017 တွင် ArcLight Cinema Cinerama Dome ၌ 'Sandy Wexler' ၏သရုပ်ဆောင်ကိုတက်ရောက်သည်။ (Jason LaVeris / FilmMagic မှရိုက်ကူးသည်)
Tim Herlihy နှင့် Adam Sandler မှရေးသားထားသည်
Adam Sandler၊ Kathy Bates၊ Fairuza Balk၊ Henry Winkler၊ Jerry Reed၊ Peter Dante နှင့် Rob Schneider တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
In The Waterboy, Bobby Boucher (Adam Sandler) သည်အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ရှိယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးရေကစားသမားအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်တောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်း Louisiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရွှံ့ခွေးကောလိပ်ဘောလုံးအသင်းမိမိအမျက်ဒေါသနှင့်ကျူးကျော်ချန်နယ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပြီးနောက်။ သူ့အမေ (ကေသီဘိတ်စ်) ကဘောလုံးသည်မာရ်နတ်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
The Waterboy ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အာဒံကို Sandler ရုပ်ရှင်၏တ ဦး တည်းဖြစ်ပြီး, ကဲ့သို့သောနှစ်တွင်ပင်ထွက်လာ၏ မင်္ဂလာဆောင်အဆိုတော်, သောအပေါ်သူ၏အောင်မြင်မှုအောက်ပါ Sandler ရဲ့ရုပ်ရှင်ပရိုဖိုင်းကိုကူညီပေးခဲ့သည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်။
Netflix မှာ Adam Sandler ရုပ်ရှင်များစွာပါဝင်ပါတယ် Big Daddy, ဒေါသစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင်အားလုံး။
၃၁ ။ ဖေဖေကြီး
Tim Herlihy၊ Adam Sandler၊ Steve Franks ရေးသားခဲ့သည်
Dennis Dugan ကရိုက်သည်
ဂျွန်စတူးဝပ်၊ ကိုးလ်စထရိုရပ်စ်၊ Dylan Sprouse၊ Leslie Mann၊ Steve Buscemi၊ Kristy Swanson၊ Josh Mostel
In ဖေဖေကြီး Adam Sandler ဆိုနီသည်အလုပ်ခွင်ကျင့် ၀ တ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုမရှိသောပျင်းရိသောလူလတ်ပိုင်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ၏ရည်းစား Vanessa (Joey Lauren Adams) သည်သူမနေမကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုစွန့်ခွာရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ တစ်နေ့တွင်ကလေးငယ်တစ် ဦး ဖြစ်သူဂျူလီယန် (ကိုးလ်နှင့် Dylan Sprouse) သည်ဆန်နီ၏တံခါးဝတွင်ဆန်နီ၏အခန်းဖော်၊ ကီဗင် (ဂျွန်စတူးဝပ်) ကဂျူလီယန်၏ဇနီးဖြစ်သည်။ ကီဗင်အတွက်စီစဉ်ထားသောတရုတ်သို့လာမည့်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်နှင့်အတူဆန်နီသည် Vanessa ကိုပြန်အနိုင်ယူရန်တာ ၀ န်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်ဂျူလီယန်ကိုအသုံးပြုသည်။ မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းဆန်နီထင်သကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။
အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိပါတယ် ဖေဖေကြီး Sandler ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့လူများက၎င်းသည်၎င်းကိုသူ၏အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်း၎င်းသည် Happy Gilmore နှင့် Billy Madison တို့နှင့်အတူရှိနေသည်။ Big Daddy သည် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောပရိသတ်၏အတည်ပြုချက်ကိုပုပ်နေသောခရမ်းချဉ်သီးတွင်ရှိသည်။
အပျက်သဘောဆောင်သောသုံးသပ်ချက်များရှိသော်လည်း ဖေဖေကြီး ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ထက်ပို $ 300 သန်းစုစုပေါင်း။
Hip … Hip-Hop … Hip-Hop - အမည်မသိ…
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၁၉၉၁
Tom Schulman မှရေးသားသည်
Bill Murray၊ Richard Dreyfuss၊ Julie Hagerty နှင့် Charlie Korsmo တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Bob Wiley (ဘီလ် Murray) သည်အမျိုးမျိုးသောကြောက်စိတ်များရှိသောသူနှင့်အရာအားလုံးကိုယေဘူယျအားဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောသူဖြစ်ပြီးသူ၏စိတ်ရောဂါအထူးကု Dr. Marvin (Richard Dreyfuss) နှင့်အတူသူ၏အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားသည်။
ဘော့ကော? ကျိန်းသေဘီလ် Murray ရဲ့ရယ်စရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် Murray ကိုကြိုက်လျှင်, သင်ထွက်စစ်ဆေးရန်ရှိသည် Caddyshack, Scrooged, အလွန် Murray ခရစ်စမတ်, နှင့် Netflix ရှိသူ၏အခြားအကြီးအရုပ်ရှင်အချို့!
Caddyshack Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်လည်းပါဝင်သည်။
အွန်လိုင်းဇာတ်ညွှန်းအပိုင်း (၃) ကိုကြည့်ပါ
29. Black သိုး
Fred Wolf ကရေးသားခဲ့သည်
Penelope Spheeris မှရိုက်ကူးသည်
ခရစ် Farley၊ David Spade၊ Tim Matheson၊ Gary Busey၊ Christine Ebersole တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
In သိုးမည်း , အယ်လ် Donnelly (တိ Matheson) ဝါရှင်တန်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ပြည်နယ်မဟုတ် D.C. - ထိုအနေအထားရှိမတည်ရှိ) ဖြစ်ဖို့အပြေးနေသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲအယ်လ်ရဲ့အစ်ကိုက Mike Donnelly (ခရစ် Farley), ကြီးမားတဲ့ဝက်အူ -up, ဖြစ်ပါတယ်။ သူကမှန်မှဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်သူ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောရှုထောင့်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Mike ကသူ့ကိုပြိုင်ပွဲမကျေအောင်သေချာအောင်လုပ်ဖို့ Al က Steve Dodds (David Spade) ကို Mike ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့အများပြည်သူမျက်လုံးထဲမှမစောင့်စေရန်ငှားရမ်းလိုက်သည်။ ဒါက Mike အခြေခံအားဖြင့်လူ့လေဆင်နှာမောင်းကြောင့်ထိုသို့ပြုထက်စကားပြောအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
သိုးမည်း Lorne Michaels မှထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် ကြယ်များ။
ဒါဟာအကြားတူညီတွေအများကြီးဆွဲရန်လွယ်ကူသည် သိုးမည်း နှင့် Tommy Boy ။ ဒီရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးက Chris Farley နဲ့ David Spade တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးငါစိုးရိမ်နေကြသည်အတိုင်း, ကဖဲ့မပါလျှင်, က fix ကြဘူး။ Farley နှင့် Spade တို့မှာဓာတုဗေဒအကြီးများရှိပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပုံတူပွားဖို့ကြိုးစားတာဟာမိုက်မဲရာကျပါတယ် Tommy Boy ။
United States, New York, New York City, The Ziegfeld ပြဇာတ်ရုံမှာ 10 ရက်အတွင်း Guy Lose ဖို့ Lavalife ရဲ့ Paramount ရုပ်ပုံများ၏ Lavalife ရဲ့နယူးယောက် Sreening စဉ်အတွင်းကိတ် Hudson နှင့်မMatthewဲ McConaughey ။ (Jim Spellman / WireImage မှဓာတ်ပုံ)
၂၈။ ၁၀ ရက်တာကာလအတွင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရခြင်း
Brian Regan၊ Kristen Buckley နှင့် Burr Steers တို့ရေးသားခဲ့သည်
Donald Petrie မှရိုက်ကူးသည်
Kate Hudson၊ မMcCဲ McConaughey၊ Adam Goldberg၊ Kathryn Hahn နှင့် Bebe Neuwirth တို့ပါဝင်သည်။
Jeannie Long နှင့် Michelle Alexander တို့သည်ရုပ်ရှင်ကိုစိတ် ၀ င်စားသောဇာတ်လမ်းတိုတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည် ဆယ်ရက်အတွင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရပုံ။
ဆယ်ရက်အတွင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရပုံ ထင်ရှားကျော်ကြားသောမဂ္ဂဇင်းကိုရေးသားသူအန်ဒီအန်ဒါဆင် (ကိတ်ဟွတ်ဒန်) ၏ဇာတ်လမ်းကိုသူမကချိန်းတွေ့စဉ်ကလူပြုမိသောအမှားများကိုပြသရန်လူကိုတစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်သူနှင့်အတူပြိုကွဲစေရန်မည်သို့လမ်းညွှန်ရမည်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ သူမတွေ့တဲ့လူက Ben (မMcCဲ McConaughey) က ၁၀ ရက်အတွင်းမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူမချစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အလောင်းအစားလုပ်လိုက်သည်။
အကယ်၍ အချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ဆယ်ရက်အတွင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရပုံ။ ၎င်းသည် Netflix တွင်စီးဆင်းရန်အကောင်းဆုံး rom-coms တစ်ခုဖြစ်သည်။ Netflix ရှိအကောင်းဆုံး Romantic Movies ၅၀ တွင်ထိပ်ဆုံး ၂၀ တွင်ပါဝင်သည်။
Heath Ledger နှင့် Julia Stiles တို့သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ် 'သင့်အကြောင်းမုန်းတီးရာများ' ရုပ်ရှင်မှမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလှန်လှောကြည့်နေကြသည်။ (Buena Vista / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ကရင် McCullah Lutz နှင့် Kirsten Smith ရေးသားခဲ့သည်
Gil Junger မှရိုက်ကူးသည်
ဂျူလီယာ Stiles၊ Heath Ledger၊ Joseph Gordon-Levitt၊ Larisa Oleynik၊ Larry Miller၊ Andrew Keegan၊ David Krumholtz နှင့် Susan May Pratt တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်။
Seattle, WA တွင်နေထိုင်သောအထက်တန်းကျောင်းသားအများအပြား၏ဇာတ်လမ်းကိုဤရုပ်ရှင်ကပြောပြသည်။ ကျောင်းမှကလေးငယ်တစ် ဦး ဖြစ်သောကင်မရွန် (ဂျိုးဇက်ဂေါ်ဒွန် - Levitt) သည် Bianca (Larisa Oleynik) နှင့်စတင်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်သူမ၏အစ်မ Kat (ဂျူလီယာစайлစ်) မှစတင်ချိန်းတွေ့သည်အထိ Bianca ၏မိဘများကသူမအားချိန်းတွေ့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်မုန်းတီးသောအရာများ နှောင်းပိုင်းတွင် Heath Ledger၊ Julia Stiles နှင့် Joseph Gordon-Levitt တို့ပါဝင်သည်။ သငျသညျအချစ်ဇာတ်လမ်းများကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ဤရုပ်ရှင်ကိုမမွငျခဲ့လျှင်, Netflix ကအပေါ်တစ် ဦး မဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ပါ!
ငါမုန်းသောအရာ မင်း Netflix ရှိအကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်လည်းဤအဆင့်တွင်ရှိသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်အတူပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၆ ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်
Jon Favreau မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားခဲ့သည်
Jon Favreau၊ Sophia Vergara၊ John Leguizamo ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်
စားဖိုမှူး Carl Casper (Jon Favreau) သည်မီးဖိုချောင်သုံးဂိမ်းတွင်အဆောတလျင်တက်ကြွဆုံးစားဖိုမှူးများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဟာသေဆုံးတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရှိနေတုန်းကံမကောင်းစွာပဲသူဟာသူ့စတိုင်နဲ့အသွင်အပြင်အနည်းငယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောစားနပ်ရိက္ခာဝေဖန်ရေးဆရာကကက်စပါအားပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်သူသည်အရည်ပျော်ကျပြီးသူ၏အလုပ်ကိုရှုံးခဲ့သည် အလုပ်မရှိ၊ သူ့ကိုငှားရမ်းမည့်သူမရှိသောကြောင့် Casper သည်ကျူးဘားအစားအသောက်ထရပ်ကားတစ်စင်းကိုမိမိဘာသာစားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေအလုံအလောက်ရရှိရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ရုပ်ရှင်သည်ထိုမီးလျှံနှင့်ချက်ပြုတ်လိုသောဆန္ဒကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ပြtroublနာရှိသောစားဖိုမှူးအကြောင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သားနှင့်ဖခင်တစ် ဦး ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အညီအမျှဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ, Carl ရဲ့အလုပ်, ဒါမှမဟုတ်သူသူထင်, သူ Carl ရှိမရှိသေးပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့သားငယ်လေးနာကျင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြောင်မြောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကဲ့သို့မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်များနှင့်ပြက်လုံးများဖြင့်ပြည့်နေသည်။ ဒါ့အပြင်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လှပတဲ့ရုပ်ရှင်ပဲ။ Jon Favreau ကလူတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးရယ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
ငါမွေ့လျော်သောသူမည်သူမဆိုကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီမဟုတ် ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ် , ငါအစဉ်အမြဲငါလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြဘူး။
အကြွေး: Minions - Universal ရုပ်ပုံများ
၂၅ ။ Minions
Brian Lynch မှရေးသားထားသည်
Kyle Balda နှင့် Pierre Coffin တို့ကရိုက်ကူးသည်
ဂျက်ဖရီရူ၊ စတိဗ် Carell၊ ကေတီ Mixon၊ Paul Thornley, Michael Beattie နှင့် Hiroyuki Sanada တို့နှင့်အတူသရုပ်ဆောင် Sandra Bullock၊ Jon Hamm၊ Michael Keaton၊ Allison Janney၊ Steve Coogan၊ Jennifer Saunders နှင့် Pierre Coffin တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်။
Minions ကနေပထမ ဦး ဆုံး spinoff ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ငါ ရုပ်ရှင်ဂိမ်း။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Minions သုံးခုဖြစ်သော Bob၊ Kevin နှင့် Stuart တို့သည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သော Scarlet (စန်ဒရာ Bullock) နှင့် Herb Overkill (Jon Hamm) တို့ကိုစတင်ကူညီခဲ့သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာဒေါ်လာ ၁.၁ ဘီလီယံကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Minions ယခုလက်ရှိအချိန်အားလုံး၏ဒုတိယမြောက်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအများဆုံးကာတွန်းကားဖြစ်သည် အေးခဲသည်။ ဒါဟာအစရုပ်ရှင်၏အရည်အသွေးထည့်သွင်းစဉ်းစားအထူးသဖြင့်အံ့သြစရာဖြစ်သည့်အစဉ်အမြဲ 11th- အမြင့်ဆုံး - စုစုပေါင်းရုပ်ရှင်။
ဒါကပြောမဟုတ်ပါဘူး Minions တကယ်တော့ငါရုပ်ရှင်အတော်လေးသဘောကျတယ် ဒါဟာအကောင်းဆုံးကျသောအချို့သောရုပ်ရှင်နှင့်အစဉ်အမြဲပြုလုပ်ခဲ့သောကာတွန်းရုပ်ရှင်များနှင့်အတူကျိန်းသေမဟုတ်။
ပုံ - MGM / Amazon
၂၄ ။ Zack နှင့် Miri သည် Porno ပြုလုပ်ကြသည်
Seth Rogen၊ အဲလစ်ဇဘက်ဘဏ်များ၊ Craig Robinson၊ Jason Mewes နှင့် Traci Lords တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Miri (Elizabeth Banks) နှင့် Zack (Seth Rogen) တို့သည်အခန်းဖော်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးဆပ်ရန်ရုန်းကန်နေရပြီးကုန်တိုက်နှင့်ကော်ဖီဆိုင်များတွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်များတွင်ပါဝင်နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ Zack နဲ့ Miri တို့ဟာသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ porno လို့ခေါ်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြုလုပ်ဖို့အကူအညီတောင်းခံကြပါတယ် ကြယ် Whores!
ဒီရုပ်ရှင်ဟာရယ်စရာကောင်းတယ်! အကယ်၍ သင်ဟာဟာသကောင်းတွေကြိုက်ရင်ကြည့်ရမယ်။
Zack နှင့် Miri သည် Porno ပြုလုပ်ကြသည် ကီဗင်စမစ်မှရိုက်ကူးပြီးအနည်းငယ်ရိုက်ကူးခဲ့သော View Askewniverse အပြင်နယူးဂျာစီပြည်နယ်အပြင်ဘက်တွင်အနည်းငယ်သောဇာတ်ကားများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မင်းဟာဟာသတန်ချိန်များစွာနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဟာသကောင်းတစ်ခုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါကမင်းအတွက်ဟာသပဲ!
Brian Lynch၊ Cinco Paul နှင့် Ken Daurio မှရေးသားခဲ့သည်
Chris Renaud မှရိုက်ကူးသည်
Kevin Hart၊ Jenny Slate၊ Louis C.K. ၊ Eric Stonestreet၊ Bell Bell၊ Dana Carvey၊ အဲလ်ဘတ်ဘရွတ်ခ်၊ Ellie Kemper၊ Hannibal Buress၊ Bobby Moynihan နှင့် Steve Coogan တို့ပါဝင်သည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝ Illumination Entertainment မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ နွေရာသီတွင်ပြဇာတ်ရုံများတွင်ပြသခဲ့သည်။ Illumination Entertainment သည်ရုပ်ရှင်များကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ငါ နှင့် Minions, Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝ Netflix နှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်လည်းပါဝင်သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ ။ ကြည့်ရှုရန်ပိုမိုကြီးစွာသောရုပ်ရှင်အဘို့ထိုအဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။
'Love Actually' Premiere တွင်တိုကျို - ဂျပန်တိုကျိုရှိတိုကျိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖိုရမ်၌တိုကျို။ (Jun Sato / WireImage မှဓာတ်ပုံ)
၂၂ ။ အမှန်တကယ်ချစ်ပါ
ရစ်ချတ် Curtis က Written နှင့်ညွှန်ကြားခဲ့သည်
မင်းသား Hugh Grant၊ Liam Neeson၊ Colin Firth၊ Laura Linney၊ Emma Thompson၊ Alan Rickman၊ Keira Knightley၊ Martine McCutcheon၊ Bill Nighy၊ Rowan Atkinson၊ Martin Freeman၊ Andrew Lincoln
ဒီရုပ်ရှင်ဟာတော်တော်များများရိုက်ကူးနိုင်ပေမယ့်ပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါအားလပ်ရက်များတစ်ဝိုက်နှစ်စဉ်ကြည့်ရှု။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်းပြချက်များအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အစိုင်အခဲရုပ်ရှင်ရဲ့ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောသွန်းရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်၏သရုပ်မကြာမီအချိန်အတန်ကြာပြန်လည်ဆုံဆည်းရန်ကောလာဟလသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညှိနေပါ။
အမှန်တကယ်ချစ်ပါ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်နှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံး Romantic ရုပ်ရှင်များတွင်လည်းပါဝင်သည်။
ဘီလ် Murray (ညာ) Wes Anderson ၏ (ညာ) ရုပ်ရှင်အသစ်, စတီဗင် Zissou နှင့်အတူ The Life Aquatic တွင်သရုပ်ဆောင်သည်။ Four Seasons Hotel တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ ^^^ / လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တိုင်းမ်စ် (Getty Images မှတစ်ဆင့်အန်းဆပ်စ် / လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တိုင်းမ်မှဓာတ်ပုံ)
၂၁ ။ Steve Zissou နှင့်အတူဘဝရေနေမှု
Wes Anderson နှင့်နော Baumbach ကရေးသားခဲ့သည်
Bill Murray၊ Owen Wilson၊ Cate Blanchett၊ Anjelica Huston၊ Willem Dafoe၊ Jeff Goldblum၊ Michael Gambon နှင့် Bud Cort တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
စတိဗ် Zissou နှင့်အတူဘဝက Aquatic သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစားသော Jaguar ငါးမန်းကိုသတ်ရန်မစ်ရှင်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သောသမုဒ္ဒရာပညာရှင်စတိဗ်ဇစ်ဆော့ (Bill Murray) ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟာသမျိုးကိုကြိုက်ရင်ဒါကအရမ်းရယ်စရာကောင်းတယ်။ Wes Anderson ၏ရုပ်ရှင်အတော်များများနှင့်မတူဘဲ, စတိဗ် Zissou နှင့်အတူဘဝက Aquatic အတော်လေးအရေးပါသောအောင်မြင်မှုစဉ်းစားသည်မဟုတ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများအနေဖြင့်ရောထွေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပရိသတ်တွေဟာရုပ်ရှင်ကိုပိုကြိုက်ပုံရသည်။ Wes Anderson ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်ရင်မင်းကဒီရုပ်ရှင်ကိုသဘောကျမှာပဲ။
သင်တို့သည်လည်းထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် လပြည့်ဘုရား၊ Netflix မှာ streaming လုပ်တဲ့နောက်ထပ် Wes Anderson ရုပ်ရှင်။
ဘာလင်၊ ဂျာမနီ - (LR) ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဘာလင်မြို့တွင်ကျင်းပသည့် ၅၄ ခုဘာလင်алеရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်နေသော“ Something's Gotta Give” ပြိုင်ပွဲအတွက်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သော Amanda Peet၊ Jack Nicholson နှင့် Diane Keaton တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ AFP PHOTO DDP / TOM MAELSA ဂျာမန် (ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်တွင်ဖတ်သင့်သည်။ TOM MAELSA / AFP / Getty Images)
Nancy Meyers မှရေးသားပြီးရိုက်ကူးခဲ့သည်
Diane Keaton၊ Jack Nicholson၊ Jon Favreau၊ Frances McDormand, Keanu Reeves နှင့် Amanda Peet
In တစ်ခုခုပေးရမည် Harry (Jack Nicholson) နှင့် Erica (Diane Keaton)၊ အသက် ၅၀ ကျော်သောလူနှစ် ဦး တို့သည်သူတို့နှင့်လုံးဝမကိုက်ညီသော်လည်းဆက်ဆံရေးကိုလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အတက်အကျ၏ဟာသအောက်ပါအတိုင်း။
ရုပ်ရှင်၏စာရေးဆရာနှင့်ဒါရိုက်တာနန်စီ Meyers တွင်fanရာမ fanbase တစ်ခုရှိပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာမှထွက်ပေါ်လာသော hit များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ငါသူမ၏အလုပ်၏ကြီးမားသောပန်ကာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသူမရဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့တူလူများစွာ, အထူးသဖြင့်ငါသိ၏ အဆိုပါ Intern, ဒါဟာရှုပ်ထွေးရဲ့အားလပ်ရက်, နှင့်ပိုပြီး!
Diane Keaton သည်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုအတွက်ဟာသသို့မဟုတ်ဂီတဖြင့်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရရှိခဲ့ပြီးသူသည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်အော်စကာဆုရရှိခဲ့သည်။
၁၉ ။ Frances Ha
Noah Baumbach၊ Greta Gerwig မှရေးသားသည်
Noah Baumbach မှညွန်ကြားခဲ့သည်
Greta Gerwig၊ Mickey Sumner၊ Adam Driver၊ Michael Zegen တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော Frances Halliday (Greta Gerwig) သည်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်နှင့်နယူးယောက်စီးတီးရှိသူမ၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှာဖွေနေစဉ်အလုပ်မှတစ်ခန်းသို့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့ခုန်ကျော်ထွက်လာသည်။
Frances နှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ရယ်စရာကောင်းသောလူများဖြစ်သည့်အပြင် Frances ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်ရုပ်ရှင်ထဲသို့ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝသောစွမ်းအင်ကိုပေးသည်။ ရုပ်ရှင်မှာရည်ရွယ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်မရှိဘူးလို့တစ်ခါတလေမှာခံစားမိပေမယ့် Frances ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဟာသကရယ်စရာကောင်းပြီးလတ်ဆတ်နေစေတယ်။
ငါလူတိုင်း Frances '' ရုန်းကန်မှုများ, အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်ကြည့်ရှုဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အချို့လူများကစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖြစ်လိုကြ။ သူတို့လုပ်ချင်သောအရာကိုသာလုပ်လိုကြသည်။ ကြောင်းဒphilosophနအတွက်ဟာသကျိန်းသေရှိပါတယ်!
အီတလီ၊ ဗင်းနစ်၊ 27ဂုတ် ၂၇ - ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့၊ ဗင်းနစ်မြို့၌ဆလာ Grande မှာကျင်းပတဲ့ ၆၅ ဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်းသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Brad Pitt နဲ့ George Clooney တို့ဟာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြပြီး၊ (Pascal Le Segretain / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၈ ။ စာဖတ်ပြီးနောက်မီးရှို့ပါ
Joel နှင့် Ethan Coen မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားခဲ့သည်
ဂျော့ခ်ျကလူနီ၊ Brad Pitt၊ Frances McDormand၊ Tilda Swinton၊ John Malkovich၊ Simmons, အဲလစ်ဇဘက် Marvel နှင့်ကီဗင် Sussman
စာဖတ်ပြီးနောက်မီးရှို့ပါ အေဂျင်စီကိုအစာကျွေးပြီးတဲ့နောက်သူ့ကွန်ပျူတာမှာပျက်စီးနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးတဲ့စီအိုင်အေအေးဂျင့်တစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြတယ်။ သူ၏ဇနီးသည်မတော်တဆအချက်အလက်များကို CD သို့ကူးယူပြီးအားကစားရုံတွင်ရှာတွေ့ပြီး၎င်းကိုရောင်းရန်ကြိုးစားသည့်အားကစားရုံ၌ထားခဲ့သည်။
စာဖတ်ပြီးနောက်မီးရှို့ပါ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင် - ဂီတနှင့်ဂီတနှင့်အကောင်းဆုံးမင်းသမီး (Frances McDormand) အတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုနှစ်ခု၌အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအော်စကာဆုအတွက်လျာထားခံရခြင်းမရှိသော Coen ညီအစ်ကိုအနည်းငယ်၏ရုပ်ရှင်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သငျသညျရုပ်ရှင်ကြိုက်လျှင်, သင်လည်းထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် လူအိုများအတွက်နိုင်ငံမရှိပါ ဒါမှမဟုတ် အိုအဘယ်မှာရှိသငျသညျအို ' Coen ကညီအစ်ကိုတွေရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးပါ။
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၁၁
ဂျေး Baruchel နှင့် Evan Goldberg ကရေးသားခဲ့သည်
Michael Dowse မှရိုက်ကူးသည်
Seann William Scott၊ Jay Baruchel၊ Alison Pill၊ Liev Schrieber၊ Eugene Levy၊ Marc-André Grondin၊
အဆိုပါရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံသည် Goon: အသေးစားအဖွဲ့ချုပ်ဟော်ကီသို့သွားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ခရီးတစ်ခု၏ဖြစ်ရပ်မှန် အာဒံကို Frattasio ကရေးသားခဲ့သည်Doug Smith။
ရန်ပွဲကာလအတွင်းရပ်တည်ချက်သို့တက်သူဟော်ကီကစားသမားထဲကကင်လုပ်ခိုင်းရိုက်နှက်ပြီးနောက်, Doug (Seann William Scott) ကိုအဖွဲ့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, သေံသတ်မှတ်သူကစားသမားအဖြစ်အသေးစားလိဂ်ဟော်ကီအသင်း join ဖို့တောင်းခံရဘာမှမယူ မည်သူမဆိုထံမှ, နှင့်လူတွေကိုတက်ရိုက်တယ်။
Goon အနည်းငယ်ရေနံစိမ်း, အနည်းငယ် raunchy နှင့် All- န်းကျင်ကောင်းသောအချိန်ပါ! ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါမြင်ဖူးသမျှထဲမှာရယ်စရာအကောင်းဆုံးဟော်ကီရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး, ဒါကြောင့်လည်း Seann William Scott ရဲ့ငါ့အကြိုက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Evan Goldberg နဲ့ Jay Baruchel တို့ပူးတွဲရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ Superbad၊ နာနတ်သီးအမြန်စသည်တို့ ), သင်ကျိန်းသေပျော်မွေ့တာပေါ့ Goon ။
Goon လက်ရှိတွင်ပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပရိသတ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောထောက်ခံချက်ရမှတ်ရှိသည်။ နောက်ဆက်တွဲ Goon: နောက်ဆုံးပေါ် Enforcers ၏ Jay Baruchel ကဒါရိုက်တာကို ၂၀၁၆ မှာဖြန့်ချိမှာပါ။
တိုကျို - နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်။ ။ မင်းသားဘင် Stiller သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာ ၂၀ ရက်၊ တိုကျိုရှိ Peninsula တိုကျိုကျွန်းဆွယ်တွင် 'Tropic Thunder' သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့တက်ရောက်သည်။ ရုပ်ရှင်ကိုဂျပန်တွင်နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ (Junko Kimura / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Ben Stiller၊ Justin Theroux နှင့် Etan Cohen တို့ရေးသားခဲ့သည်
ဘင် Stiller ဒါရိုက်တာ
ဂျက်ဘလက်ခ်၊ တွမ်ကရုဇ်၊ ဂျေးဘားချယ်၊ ဒန်နီမက်ဘရိုက်၊ စတိဗ်ကူဂန်၊ ဘီလ်ဟာဒေး၊ နစ်ခ်နိုလ်လ်နှင့် Brandon T. Jackson
In အပူပိုင်းမိုးကြိုး ကြီးမားတဲ့ဘတ်ဂျက်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ စစ်ရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေရဲ့ကြယ်တွေဟာစစ်မှန်တဲ့အရည်အသွေးကိုရိုက်ကူးဖို့တောတွင်းထဲကိုဝင်သွားကြတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေဟာလက်နက်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာနဲ့ဘိန်းဖြူစစ်ဆင်ရေးကိုအမီလိုက်လာတဲ့အခါအခြေအနေတွေကရူးသွပ်သွားတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကကျနော့်အမြင်မှာနည်းနည်းနိမ့်ကျနေတယ်။ ၎င်းသည်လူအများအပြားကိုအမြတ်ထုတ်ရန်၊ ဒါဟာတကယ်ကိုရယ်စရာကောင်းပြီးလူရွှင်တော်တချို့နဲ့အတူကြီးကျယ်တဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။
အပူပိုင်းမိုးကြိုး ထို့အပြင်အဆင့် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်စားမှုရုပ်ရှင် ၅၀ ။ ဒါဟာဟာသနဲ့အတူနည်းနည်းပဲထွက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီရယ်စရာရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်ရင်ကြည့်ရတာကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဆစ်ဒနီ၊ သြစတြေးလျ - ဇွန် ၁၃ - ဂျက်ဘလက်ခ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၃ ရက်၊ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ Event Cinemas George Street တွင် 'Kung Fu Panda 2' ၏ 'သြစတေးလျ Kung Fu Panda' ပွဲကိုရောက်ရှိသည်။ (Don Arnold / WireImage မှဓာတ်ပုံ)
၁၅ ။ Kung Fu Panda
Mark Osborne နှင့် John Stevenson တို့ကရိုက်ကူးသည်
Jack Black၊ Dustin Hoffman၊ Seth Rogen၊ Angelina Jolie၊ ဂျက်ကီချန်း၊ Lucy Lui၊ Ian McShane နှင့် David Cross တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
In Kung Fu Panda, Po (Jack Black) သည်သူ့အဖေ၏ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောpရာမပန်ဒါသည်နဂါးစစ်သည်တော်ဖြစ်လာရန်နှင့်ကျေးရွာအားနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Tai-Lung မှဆီးနှင်းကျားသစ်နှင့်ကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူမှဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Kung Fu Panda Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေး ၅၀ တွင်လည်းပါဝင်သည်။ သင်ကာတွန်းရုပ်ရှင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းသည် Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Kung Fu Panda3အခုအချိန်မှာ Netflix မှာ streaming လုပ်နေပါတယ်။ သင်ရှာနိုင်လျှင် Kung Fu Panda2အွန်လိုင်းမှာမင်းမှာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒုတိယရုပ်ရှင်ကို Netflix တွင်မကြာမီထုတ်လွှင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
၁၄ ။ အိုဘယ်မှာအို '' အစ်ကို,
ဂျော့ခ်ျကလူနီ၊ ဂျွန်တူတာရို၊ Tim Blake Nelson၊ Charles Durning၊ Michael Badalucco၊ John Goodman နှင့် Holly Hunter
အိုဘယ်မှာအို '' အစ်ကို, ထိထိရောက်ရောက်မဟိုးမားရဲ့ The Odyssey အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ဇာတ်လမ်းတစ် 1940 Re- စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Ulysses Everett (ဂျော့ကလူနီ) နှင့်အခြားအကျဉ်းသားနှစ် ဦး တို့သည်မဟာစီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းမစ္စစ္စပီရှိဂိုဏ်းဂိုဏ်းတစ်ခုမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်။ Ulysses ကဒီလူတွေကိုသင်္ဂြိုဟ်တဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ကြိုးပမ်းရင်းသူ့မိသားစုကိုပြန်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အိုဘယ်မှာအို '' အစ်ကို, အကယ်၍ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်အကောင်းဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည့်အော်စကာဆုအတွက်အကယ်ဒမီဆု ၂ ခုအတွက်လျာထားခြင်းခံရသည်။
Bob Hoskins သည် ၁၉၈၈ 'Who Roged Rabbit ကိုဘောင်ချထားသူ' ရုပ်ရှင်မှ Jessica Rabbit မှလှည့်ဖြားသည် (Buena Vista / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၃ ။ အဘယ်သူသည်ရော်ဂျာယုန် Framed
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၁၉၈၈
ဂျက်ဖရီစျေး, Peter Seaman ကရေးသားခဲ့သည်
Robert Zemeckis မှရိုက်ကူးသည်
Bob Hoskins၊ ခရစ်စတိုဖာလွိုက်၊ ချားလ်စ်ဖလဲရှာ၊ Stubby Kaye၊
ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များသည်အလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးလူသားများသည်လူသားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံသည့်ကမ္ဘာကြီးတွင်၊ လူသတ်မှုအတွက်မည်သူကသူ့ကိုမည်သူ့ကိုပုံဖော်သည်ကိုရှာဖွေရန် Roger Rabbit မှ Private Detective Eddie Valiant (Bob Hoskins) ကိုငှားသည်။ သူကပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးသကဲ့သို့, Valiant တစ် toon- မုန်းသောသူသည်မိမိပုံရသည်အတိုင်းအရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်။
အဘယ်သူသည်ရော်ဂျာယုန် Framed ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည် Roger Rabbit ကိုဘယ်သူဆင်ဆာလုပ်ခဲ့သလဲ။ Gary K. Wolf က ၁၉၈၁ တွင်ထုတ်ဝေသည်။
ဒဏ္legာရီဒါရိုက်တာရောဘတ် Zemeckis, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူစတီဗင် Spielberg နှင့်အတူတူပင်ရုပ်ရှင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ် animator extraordinaire ရစ်ချတ်ဝီလျံနှင့်အတူကြောင့်ကြီးမြတ်ဖြစ်ခညျြနှောငျ။ အော်စကာသုံးမျိုး (အကောင်းဆုံး Visual Effects, Best Sound Effects နှင့် Best Editing) ကိုအနိုင်ရခဲ့သည့် Who Framed Roger Rabbit နှင့်အဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့ပင်။
သော်လည်း အဘယ်သူသည်ရော်ဂျာယုန် Framed ၁၉၈၀ (ဒေါ်လာ ၇၀ သန်း) အတွက်ကြီးမားသောဘတ်ဂျက်ရှိခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ဒေါ်လာသန်း ၃၃၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။
Los Angeles - 1985: မင်းသား John Candy သည် ၁၉၈၅ ခန့်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Los Angeles တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Donaldson Collection / Michael Ochs မှမော်ကွန်း / Getty Images ဓာတ်ပုံ။ )
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၁၉၉၃
Lynn Siefert၊ Tommy Swerdlow၊ Michael Goldberg မှရေးသည်
Jon Turteltaub မှရိုက်ကူးသည်
John Candy၊ Leon၊ Doug E. Doug၊ Rawle D. Lewis နှင့် Malik Yoba တို့ပါဝင်သည်
Cool Runnings ၁၉၈၈ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့်ဂျမေကာဘောလုံးအဖွဲ့၏ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံသည်။ ဇာတ်လမ်းကိုမျက်နှာပြင်အတွက်ချဲ့ကားချဲ့ပြီးပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်နွေရာသီအိုလံပစ်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီနိုင်သောဂျမေကာ Sprint အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ဂျမေကာအိုလံပစ်အသင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဟောင်းနှင့်အတူဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အတွက် bobsledders အဖြစ်လေ့ကျင့်မှုစတင်ခဲ့သည်။
Cool Runnings ငါ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဟာသများစွာနှင့်ကိုးကားထားသောလိုင်းများစွာရှိသည်။ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်လည်းထိုရုပ်ရှင်သည်ပါဝင်သည်။
ကရေးသားခဲ့သည် Guillaume Laurant နှင့် Jean-Pierre Jeunet
Jean-Pierre Jeunet မှဒါရိုက်တာ
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်
Amelie သည်ကလေးဘဝတွင်ခိုလှုံရာကမ္ဘာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူတို့၏ဘ ၀ များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိုသည်။ သူမမတိုင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာကတိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ခဲ့သူတစ် ဦး ဦး ၏ပိုင်ဆိုင်သောသူမ၏တိုက်ခန်းရှိသေတ္တာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်သူသည်သူမထံသို့သေတ္တာကိုပြန်ပို့ရန်ခရီးထွက်သွားသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်သူမကလူတွေကိုများများကူညီပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူမကိုယ်တိုင်သူမကူညီသည်။
ဒီနေရာမှာငါတို့ပြောနိုင်တယ်ထင်တယ် Amelie ၀ န်ဆောင်မှုတွင်သူတို့ထိုက်တန်သောလေးစားမှုမရရှိသည့်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများစွာရှိနေသော်လည်း Netflix တွင်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ Amelie သို့သော်အမေရိကတွင်အလွန်လူကြိုက်များလာသည့်ပုံသဏ္brokeာန်ကိုချိုးဖဲ့ခဲ့သည်။
သော်လည်း Amelie အချည်းနှီးသောပြင်သစ်ကိုပြန်သွားကြ၏, Amelie အကောင်းဆုံးမူရင်းဇာတ်ညွှန်းနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားရုပ်ရှင်အပါအ ၀ င်အကယ်ဒမီဆု ၅ ဆုအတွက်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
၁၀ ။ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ
David Wain ကဒါရိုက်တာ
သရုပ်ဆောင် - Amy Poehler၊ Bradley Cooper၊ Michael Ian Black၊ Paul Rudd၊ Janeane Garofolo၊ David Hyde Pierce၊ Elizabeth Elizabeth, H. Jon Benjamin၊ ယုဒ Friedlander၊ Nina Hellman၊ Ken Marino၊ Zak Orth၊ David Hyde Pierce, Joe LoTruglio, Christopher Meloni၊ အေဒီ Miles၊ Marguerite Moreau၊ Marisa Ryan၊ Molly Shannon၊ Michael Showalter နှင့် Kevin Sussman
စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ အဓိကအားဖြင့်စခန်းတိုင်ပင်မှူးမတ်များသည်သူတို့၏နွေရာသီအားလမ်းမှန်ကိုအဆုံးသတ်လိုကြသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့မှာတစ်ခုခုရှိသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ထိုနေ့၏ပင်မနေ့ ၉း၃၀ တွင်သူတို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းချိန်ကိုပြောပါ။
David Wain နှင့် Michael Showalter မှရေးသားခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိချိန်၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေးစားခြင်းမခံရခြင်း၊ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ အချိန်ကာလ၏အကြီးမားဆုံးသောအစွန်းရောက်ရုပ်ရှင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားတှငျ, ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်သူမျှမ fanbase ရှိပါတယ် စိုစွတ်သော ကျပန်း။ သူများသည်ပရိသတ်များအသည်းအသန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကအသစ်သောအဘို့မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ ဒီနွေရာသီတွင် Netflix သို့ miniseries
လူတိုင်းအတွက်ပြန်လာနေသည် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမနေ့ ။ ဒါဟာပျော်စရာဖြစ်မယ့်, နှင့်မျှော်လင့်ပါကဆွယ်တာအင်္ကျီများစွာသော feature ပါလိမ့်မယ်။
ဤရုပ်ရှင်သည်လူကြိုက်များခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်လွယ်ကူသောထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟောလီးဝုဒ် - သြဂုတ် ၁၃ -၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဟောလီးဝုဒ်တွင်၊ ဂွမ်မန်၏တရုတ်ပြဇာတ်ရုံတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင်သရုပ်ဆောင်များ Michael Cera (R) နှင့် Jonah Hill တို့က Sony Pictures ၏ 'Superbad' ရုပ်ရှင်ကိုပြသသည်။ (Vince Bucci / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၉ ။ မင်္ဂလာပါ
ရှေ Rogen နှင့် Evan Goldberg ကရေးသားခဲ့သည်
Greg Mottola ကရိုက်သည်
အရှုပ်တော်ပုံ၏ရာသီ6စတင်သောအခါ
Jonah Hill၊ Michael Cera၊ Christopher Mintz-Plasse၊ Emma Stone၊ Seth Rogen၊ Bill Hader၊ Joe Lo Truglio နှင့် Martha MacIsaac တို့ကိုသရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီကဖြည့်စွက်ထားသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Netflix မှာဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိခဲ့တယ်။ မင်္ဂလာပါ စာရေးဆရာများအဖြစ်ရှေ Rogen နှင့်အီဗန် Goldberg ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချိုးခဲ့သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာလည်းငွေရေးကြေးရေးအရအရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Seth (Jonah Hill) နှင့် Evan (Michael Cera) တို့သည်အထက်တန်းကျောင်းသားများနှင့်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်လည်းလူကြိုက်များဖြစ်မဖြစ်ပျက်။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ကောလိပ်များသို့မသွားမီအတွေ့အကြုံရင့်လာစေရန် Seth နှင့် Evan တို့သည်သူတို့၏အထက်တန်းကျောင်းပါတီတွင်သူတို့၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကြုံတွေ့ရန်ကြိုးစားကြသည်။
ဝက်အူချောင်းပါတီ, Evan Goldberg နှင့် Seth Rogen တို့မှနောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်သည်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကာတွန်းရုပ်ရှင် ၅၀ ၏အဆင့်သို့လည်းရုပ်ရှင်ကိုထည့်ပါမည်။
၈ ။ Hot Fuzz
Edgar Wright, ရှိမုန် Pegg ကရေးသားခဲ့သည်
Edgar Wright မှရိုက်ကူးခဲ့သည်
Simon Pegg၊ Nick Frost၊ Martin Freeman တို့ပါဝင်သည်
လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းသက်သေပြပြီးသောအခါ Nicholas Angel (Simon Pegg) သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Sandford နှင့် Gloucestershire ရှိစုံလင်သောအကောင်းဆုံးကျေးရွာသို့အတင်းအကျပ်ပြောင်းရွှေ့ခံရသည်။ အလေးအနက်ထား, Sandford နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဲ့သို့အင်္ဂလန်မှာတစ်နှစ်တာ၏ကျေးရွာအနိုင်ရရှိ။ အိန်ဂျယ်လည်းတပ်ကြပ်ကြီးရာထူးတိုးသည်။ သူ Sandford သို့ရောက်ပြီးမကြာမီတွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသေဆုံးမှုများစွာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Nick နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Danny Butterman (Nick Frost) သည်ဆက်လက်ရှာဖွေနေစဉ်သေဆုံးမှုများစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ မြို့တွင်းရှိလူတစ် ဦး သေဆုံးမှုအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိပါသလား။ အိန်ဂျယ်နေထိုင်သူများထံမှ blowback ရှိနေသော်လည်း, ထွက်ရှာရန်ကြိုးစားသည်။
Pegg နှင့် Frost တို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် သေမင်း၏ Shaun , Wright လည်းမတိုင်မီမတိုင်မီညွှန်ကြားထားသောဖုတ်ကောင် spoof Hot Fuzz ။ ဒီရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးကတူညီပြီးထူးခြားတယ်။ ဗြိတိန်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ခြောက်သွေ့သော၊ Hot Fuzz အံ့ and စရာကောင်းပြီးခမ်းနားထည်ဝါသောအသွင်ဖြင့်ထိုဥပမာ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hot Fuzz Netflix ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အကူအညီနှင့်အဖွဲ့၏အခြားရုပ်ရှင်များ၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကြီးမားသောထိခိုက်နစ်နာမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သေမင်း၏ Shaun နှင့် ကမ္ဘာ့အဆုံး ။
New York, NY - သြဂုတ် 04: (L-R) Paul Rudd, James Franco, Seth Rogen နှင့် David Krumholtz တို့သည် 'Sausage Party' ၏နယူးယောက်စီးတီးရှိသြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ (ဂျေမီဆက်မက်ကာသီ / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၇ ။ ဝက်အူချောင်းပါတီ
Kyle Hunter၊ Ariel Shaffir၊ Seth Rogen နှင့် Evan Goldberg မှရေးသားခဲ့သည်
Conrad Vernon နှင့် Greg Tiernan တို့ကရိုက်ကူးသည်
ဂျိမ်းနာဟေး၊ Kristen Wiig၊ ဂျိမ်းစ်ဖရန်ကို၊ ဘီလ်ဟတ်ဒါ၊ Craig ရော်ဘင်ဆင်၊ ဒန်နီမက်ဘရိုက်၊ Michael Cera, Selma Hayek၊ Nick Kroll, Paul Rudd, Edward Norton နှင့် David Krumholtz
ရုပ်ရှင်၌, ဖရန့် Weinerton (Seth Rogen), ကြီးမားသောအိပ်မက်နှင့်အတူခွေးဟောင်, သူ၏မိတ်ဆွေများနှင့်သူချင်းအစားအစာများအုပ်စုတစ်စုကုန်စုံစတိုးဆိုင်ထဲကနှင့်မဟာ Beyond သို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်ကြိုးစားသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါစတူဒီယိုကဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ခွင့်ပြုပါလို့ငါမယုံဘူး။ ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရပျော်စရာပါပဲ။ ၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်၏အလားအလာကိုကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြင့်ရိုက်ကူးပြီးနောက်ထိုအမြင်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဒါဟာပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအားဖြင့်ကြီးသောအလုပ်ပါပဲ။ သင် Rogen ရဲ့အခြားရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်လျှင်, သင်ကျိန်းသေကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ် ဝက်အူချောင်းပါတီ။
ဝက်အူချောင်းပါတီ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်သည့်အကောင်းဆုံးဟာသအသစ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Findfl Dory နှင့် Zootopia တို့ကို 2016 မှအခြားကာတွန်းရုပ်ပြဇာတ်ကားများအဖြစ်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကာတွန်းရုပ်ရှင် ၅၀ ၏အဆင့်တွင်ရှိသည်။
လန်ဒန် - မတ် ၁၀ - အမေရိကန်မင်းသမီး Renee Zellweger၊ ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင် Hugh Grant၊ ဗြိတိန်ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့် Geri Halliwell နှင့်ဗြိတိသျှသရုပ်ဆောင် Colin Firth တို့သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၀ ရက်အင်္ဂလန်ရုပ်ရှင်ရုံ 'Bridget Jones' Diary 'ရုပ်ရှင်၏ဗြိတိသျှပြသမှုသို့ရောက်ရှိသည်။ လန်ဒန်မှာ။ (Dave Hogan / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၆ ။ Bridget ကဂျုံးစ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ
Helen Fielding၊ Andrew Davies၊ Richard Curtis မှရေးသားခဲ့သည်
Sharon Maguire မှရိုက်ကူးသည်
Renee Zellweger၊ Colin Firth၊ Hugh Grant၊ Gemma Jones၊ Jim Broadbent၊ Embeth Davidtz
Bridget Jones (Renee Zellweger) သည်အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီမှအလယ်အလတ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သူ Mark (Colin Firth) နှင့်ခရစ်စမတ်ပွဲတော် Bridget တွင်သူမဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုစုစည်းရန်သူသည်ဒိုင်ယာရီတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကသူမရဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Bridget ကသူမရဲ့အိပ်မက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Bridget ကဂျုံးစ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ အမည်တူ၏ဟယ်လင် Fielding ရဲ့စာအုပ်အပေါ်အခြေခံသည်။ Fielding သည်ဇာတ်ညွှန်းရေးရန်လည်းကူညီခဲ့သည်။
Zellweger သည် Bridget Jones ကဲ့သို့ကောင်းသည်။ သူမ၏ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုလျာထားခြင်းခံရသည်။
၅ ။ The Big Short
Adam McKay နှင့် Charles Randolph တို့ရေးသားခဲ့သည်
Adam McKay မှရိုက်ကူးသည်
Brad Pitt၊ Ryan Gosling၊ Steve Carell နှင့် Christian Bale တို့ပါဝင်သည်
The Big Short ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းဈေးကွက်ပြိုလဲခြင်းမတိုင်မီကြီးမားသောဘဏ်များနှင့်အိမ်ရာဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်သည့်သြဇာရှိသူလေး ဦး ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံသည် The Big Short: Doomsday Machine အတွင်းပိုင်း မိုက်ကယ်လူးဝစ်ကရေးသားခဲ့သည်။
The Big Short ၂၀၁၆ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းတွင်အော်စကာငါးယောက်အတွက်ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးအကောင်းဆုံးလိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ဇာတ်ညွှန်းအတွက်အော်စကာဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် The Big Short အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာပါတဲ့ရုပ်ရှင်အများအပြားပြက်လုံးများနှင့်ရယ်မော၏နံပါတ်ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာပျော်စရာပါပဲ။ နှင့်အညီ, ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကရုပ်ရှင်ရုံ hit ဖို့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လန်ဒန်, အင်္ဂလန် - ဇူလိုင် ၁၀: Ellen DeGeneres သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ရှိ Odeon Leicester ရင်ပြင်တွင် 2016 ကို 'Finding Dory' ၏ UK Premiere သို့ရောက်ရှိသည်။ (Dave J Hogan / Dave Hogan / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
4. Dory ရှာဖွေခြင်း
Andrew Stanton နှင့် Victoria Strouse မှရေးသားခဲ့သည်
Andrew Stanton နှင့် Angus MacLane တို့ကရိုက်ကူးသည်
Eden O'Neill၊ Kaitlin Olson နှင့် Ty Burrell တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Ellen DeGeneres၊ Albert Brooks၊ Hayden Rolence၊ Diane Keaton၊ Eugene Levy
ကျနော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်လမ်းမရှိသော Dory ရှာဖွေခြင်း Netflix ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ စာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သည်။ Dory ရှာဖွေခြင်း သည် Pixar ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်သည် Nemo ရှာဖွေခြင်း 2003 ကနေကံမကောင်းစွာပဲ, Nemo ရှာဖွေခြင်း အခု Netflix ပေါ်မှာ streaming မပေးပါ။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Dory (Ellen DeGeneres) သည်သူမ၏မိသားစုကိုရှာရန်ရှာသည်။ သို့သော်သူမမှတ်ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်သူမသည်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ Nemo (Hayden Rolence) နှင့် Marlin (Albert Brooks) တို့သည်ဒိုရီကိုရှာဖွေပြီးသူမ၏မိဘများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါထင်ပါတယ် Zootopia ထက်နည်းနည်းရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည် Dory ရှာဖွေခြင်း၊ သို့သော်ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်များသည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ပြရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်တွင်နေရာတစ်နေရာရထိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၄ Beverly Hills, CA, USA ။ Byron Howard, Rich Moore, Zootopia သည် Beverly Hilton တွင်ကျင်းပသည့် ၇၄ ကြိမ်မြောက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲအတွင်း Animated အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ဆုကိုလက်ခံသည်။ မသင်မနေရချေးငွေ - USA Today မှတစ်ဆင့် Paul Drinkwater / လက်ကမ်းစာစောင်ဓာတ်ပုံ
၃ ။ Zootopia
Rich Moore နှင့် Byron Howard တို့ကရိုက်ကူးသည်
ဂျင်နီစလိတ်၊ ဂျဲနီဆလိတ်၊ နိတ် Torrence၊ Bonnie Hunt၊ Don Lake၊ Tommy Chong, J. K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk နှင့် Shakira
Zootopia Netflix နှင့် Disney တို့အကြား Pay-TV သဘောတူညီချက်၏ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်အသစ်များကိုမကြာမီ streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထည့်သွင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၂၀၁၆ ရဲ့အကောင်းဆုံးကာတွန်းကားတွေထဲကတစ်ခုပါ။ Zootopia ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံများတွင်တစ် ဦး ထက်ပို $ 1 ဘီလီယံစုစုပေါင်း။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ယုန်ဂျော့ဒ်ဟော့ (ဂျင်နီဖာဂူဝင်) သည် Zootopia ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်ပထမဆုံးယုန်ဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့်သမိုင်းကိုပြသသည်။ သူသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အရည်အချင်းအရှိဆုံးအရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူမသည်ကားရပ်နားရန်နေရာတွင်သာရှိသည်။ ဂျူဒီသည်သူမ၏အလုပ်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရသည်။
Wes Anderson နှင့် Roman Coppola ရေးသားခဲ့သည်
Wes Anderson ကဒါရိုက်တာ
Bruce Willis၊ အက်ဒွပ်နော်တန်၊ Bill Murray၊ Frances McDormand၊ Tilda Swinton၊ Jason Schwartzman၊ Bob Balaban၊ Jared Gilman၊
In လပြည့်ဘုရား၊ Kara Hayward နှင့် Jared Gilman တို့မှကစားသောလူငယ်ချစ်သူစုံတွဲတစ်တွဲသည်သူမ၏နေအိမ်မှနယူးအင်္ဂလန်ရှိကျွန်းရှိနွေရာသီစခန်းအနီးရှိကင်းထောက်တပ်မှထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ရှာဖွေသူပါတီများသည်လူငယ်ချစ်သူများကိုရှာဖွေရန်စီစဉ်သည်။
Wes Anderson ရုပ်ရှင်အများစုလိုပဲ Moonrise နိုင်ငံတော် ရုပ်ရှင်၏အဓိကအခန်းကဏ္inတွင်အက်ဒွပ်နော်တန်၊ Bruce Willis၊ Frances McDormand၊ Tilda Swinton နှင့် Jason Schwartzman စသည့်ကြီးမားသောကြယ်များဖြင့်အံ့သြဖွယ်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ Moonrise နိုင်ငံတော် ထို့အပြင်ရှည်လျားသောခြေရာခံရိုက်ချက်များ, အချိုးကျဘောင်များနှင့်သင်တန်း၏, အရာမတူသောစတိုင်ရွေးချယ်မှုများကဲ့သို့အန်ဒါဆင်ရဲ့လက်မှတ်နည်းစနစ်ပါရှိပါတယ်။
Moonrise နိုင်ငံတော် သူတို့အားလုံးတကယ်ကောင်းပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းငါ့အကြိုက်ဆုံး Wes Anderson ကရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် ၂၀၁၃ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းအတွက်အော်စကာနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးဟာသဇာတ်ကားအတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
Wes Anderson ၏ရုပ်ရှင်များသည် Netflix တွင်ရှိပါက Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။ ရဲ့အခြို့သောပိုရကြပါစို့
နယူးယောက် - 23ပြီ ၂၃: (ယူအက်စ် TABS နှင့်ဟိုလ်လီဝုဒ်သတင်းထောက်) လူရွှင်တော်၊ စာရေးဆရာ Tina Fey နှင့်မင်းသမီး Lindsay Lohan တို့သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၂၃ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့၊ Loews Lincoln ရင်ပြင်ပြဇာတ်ရုံတွင် '' Mean Girls '' သီးသန့်ပြသခြင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Paul Hawthorne / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Tina Fey မှရေးသားသည်
Mark Waters မှရိုက်ကူးသည်
Lindsay Lohan၊ Rachel McAdams၊ Tina Fey၊ Tim Meadows၊ Amy Poehler၊ Ana Gasteyer
သူမ၏သတ္တဗေဒပညာရှင်မိဘများနှင့်အတူအာဖရိကတွင်ကြီးပြင်းလာပြီးနောက် Cady Heron (Lindsey Lohan) သည်အမေရိကန်အထက်တန်းကျောင်းတွင်သရုပ်ဆောင်၊ ကောလာဟလများနှင့်မရပ်မနားပြဇာတ်များဖြင့်ပစ်ချခံရသည်။ Cady သည်သူ၏မိတ်ဆွေသစ်များ၏အကူအညီဖြင့်ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်သောလူကြိုက်များသောမိန်းကလေးများဖြစ်သောပလတ်စတစ်များကိုဖြိုချရန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သည်။
Mean Girls ထိထိရောက်ရောက်မ Rosalind Wiseman ရဲ့စာအုပ်အပေါ်အခြေခံသည် Queen Bees နှင့် Wannabes: မင်းသမီးကိုကူညီခြင်းကူလပ်စ်၊ အတင်းအဖျင်း၊ ရည်းစားများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အခြားဖြစ်ရပ်မှန်များ ။ Tina Fey သည်ဇာတ်ညွှန်းရေးဆွဲရာတွင်ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ ရုပ်ရှင်သည်အလွန်ကွဲပြားသည်။
ယခင်ကရေးသားထားသောရုပ်ရှင်နှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်း စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် ကြယ်များ, SNL ဖန်တီးသူ Lorn Michael ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Mean Girls နှင့်ယခင် SNL Lohan နှင့် Fey နှင့်အတူရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကြယ် Amy Poehler၊ Tim Robbins နှင့် Ana Gasteyer တို့ပါဝင်သည်။
Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lizzy Caplan, Daniel Franzese နှင့် Jonathan Bennett တို့ကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာတစ်ခုကိုမတွေ့ရသေးပါက Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု:ပြည်နယ်တိုင်းတွင်အခြေစိုက်သည့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များ
ဂျော်ဒန် Baker အပေါငျးတို့သအမေရိကန်
Kono subarashii sekai ni shukufuku3wo
အရှုပ်တော်ပုံ ၆ ကိုဘယ်မှာကြည့်နိုင်မလဲ